Blog-Kubvarura: Hamelife | Martech Zone
Svondo, July 8, 2007 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Hamelife iri blog yakapihwa kune vabereki vanoda kuve vakasiyana. Kuva nemubereki chinhu chiri padyo uye chinodiwa kwandiri. Ndine mumwe mwanakomana anotangira paIUPUI kudonha uku uye mwanasikana ari pakati chikoro.
Ini ndaive baba vechidiki uye pamwe ndaikanganisa zvese zvaigona kuitwa nemubereki. Ndiri mutendi akasimba kuti neimwe nzira muchishamiso chehupenyu, Mwari anotendera vabereki kuti vakanganisa uye vagare vaine vana vakakura - sekureba sekuvada nemoyo yedu yese uye vaise pamberi pedu!
Ndiri kuzoteerera zvakanyanya hamelife uye kupfuudza zvikanganiso zvandakaita kuti vamwe vasazopinda mukunyara!
Kuitwa kwako kweiyo Chidimbu chemusoro zvinonakidza. Iyo theme inoshamisa ine gourourous dhizaini iyo yakagadziridzwa uye yakavakirwa kuitira kugona kukuru. Ini ndinonyanya kuda mashandisiro aunoita CSS yeyako logo uye netaini, asi wakachengeta zvirimo zveKutsvaga Engines kuverenga. Kuita zvakanaka! Zano rekutanga nderekuti iwe uwedzere a Sitemap, zvakadaro! Uyu ndiwo mugwagwa weinjini dzekutsvaga kuti vafambe zviri nyore pane yako saiti vasingatombozvionera vega.
Changu chandinofarira Sitemap Plugin ndiyo 3.0b7 vhezheni yeiyo Google Sitemap Plugin. Ini pachangu ndakaigadzirisa kuti iendese kuYahoo! futi uye akatumira kodhi kumunyori asi iye haana kuivaka mune inotevera kuburitsa parizvino. Ndinovimba achazviisa.
Paunenge iwe wawana yako mepu munzvimbo, chinotevera chinhu ndechekugadzirisa yako robots.txt faira ine nzvimbo yeiyo sitemap. Uku ndiko kuwedzera kuchangobva kuitika kune iyo Sitemap kududzirwa, asi zvirinani kutora mukana izvozvi pane kupfuura gare gare! Heano maitiro aanofanira kutarisa:
Mushandisi-mumiriri: * Rega: / wp- Sitemap: http://www.hamelife.com/sitemap.xml
Rory akanyatsokumbira ini ndinobata pamusoro pekuti kana kwete blogging chikamu chinofanirwa kuve chayo bhurogu kana kuve chikamu chehamelife. Ini ndichatora nzira yewimpy yekubuda ndobva ndati ndinofunga, pakupedzisira, zviri kwauri. Zvisinei, ini ndinogona kunzwisisa kana vanhu vakataura pamusoro pazvo - sezvo misoro miviri iri yakanyatsosiyana.
Ingori kufunga, asi pane nzira here yekuti iwe ugadzire Parenting peji uye peji reBlogging iro vanhu vanogona kuenda rakananga pamwe chete nemaviri feeds, imwe yega yega? Ini ndinofunga izvi zvinogona kuitwa uchishandisa Tagging plugin senge iyo Yekupedzisira Tag Warrior uye kumaka yega yega post ne "kubereka" kana "kublogi". Zvinogona kutora rimwe basa, asi zvingave zvakanaka chaizvo!
Ndakaonawo pandakayedza URl, senge http://www.hamelife.com/parenting kuti yakajairwa 404 peji inouya. Buda yangu positi yekugadzirisa 404 peji - zvinoita sekugadzira yetsika injini yekutsvaga yako saiti.
Hamelife inzvimbo inopinza ine zvemukati zvemukati. Rory ane mashoma mashoma kukwidza ruoko rwake futi. Tarisa uone hamelife menyu kumusoro kumusoro kurudyi… yakasarudzika (uye inonakidza!). Ndatenda nekundirega ndichipa blog yako, Rory.
Jul 8, 2007 na4: 01 PM
Ndatenda nekundirega ndichipa blog yako, Rory
Uri kuseka, Doug? Ndiri kukutendai zvikuru nekukanda ziso rinobatsira pane ino saiti. Ini ndinoda rairo dzese dzandinogona kuwana, uye ndinotenda chaizvo zvirevo zvawakapa.
Kutanga kubva, ndinofuridzirwa nekurumbidza kwako. Ndinokutendai zvikuru - vari kukurudzira zvikuru.
Zvino, ndinoshamisika kana iwe uchikwanisa kundibatsira nemamwe matipi ako:
Pfungwa # 1 - Iyo M yeahelife inotora mushanyi kune mepu. Ini ndaishandisa iyo Sitemap yakagadzirirwa Cutline. Ndine izvi zvakagadziriswa nenzira kwayo here? Kana ndinofanira kuenda ndakananga kuPoint # 2 ndogadzirisa marobhoti angu.txt nemazvo?
Yangu marobhoti.txt anoverenga chaizvo:
Rega: / wp-zvemukati /
Rega: / wp-admin /
Rega: / wp-inosanganisira /
Rega: / wp-
Rega: / feed /
Rega: / trackback /
Rega: / cgi-bin /
uye ndinayo iri hamelife.com/wpblog/robots.txt. Chimwe chinhu hachiratidzike kunge chakakodzera neichi - ndinonzwa sekunge chinofanira kunge chiri kune imwe nzvimbo, asi handina chokwadi chekuti ndozviita sei. Ini ndaigona kushandisa rubatsiro.
Yangu yekumisikidza ndeyekuti ndive neblog iri muhamelife.com/wpblog, saka ini handina iyo mumidzi dhairekitori. Unogona kuona kushushikana uku kuri kundibata!
Pfungwa # 3 - Ndinokutendai nezano renyu, ndichafanira kufunga zvakawanda nezvazvo. Ndiri kusendamira zvakanyanya kune yechipiri blog. Ini ndoziva zvinoreva kuchengetedza mijenya yezviri mukati, asi ndiri kudzidza kuve ndakanyanya kudzoserwa pamusoro pechinhu ichi cheku blogga - usanyanya kushushikana.
Pfungwa # 4 - Ndiri kutarisa pane yako WordPress 404 chinyorwa sezvatinotaura. Iri izano rakanaka kwazvo uye ini ndicharishandisa nekukurumidza sezvazvinogona.
Ndatenda zvakare, Doug. Rubatsiro rwako runotendwa zvikuru.
Jul 8, 2007 na4: 41 PM
Ndingakurudzira kuisa yako robots.txt faira mune yako dhairekitori. Unogona kuwana chinoshamisira, hazvo, woisa chinongedzo munzvimbo yacho mumudzi wako .htaccess faira.
Dzorera marobhoti.txt http://hamelife.com/wpblog/robots.txt
Ndingadai ndichiri kuisa XML sitemap munzvimbo pamwe nekushandisa iyo plugin yandakadoma mu 1. An XML sitemap inoenderana ne Sitemap standard. Iyi mepu ichavaka zvakare nezvose zvinyorwa uye otomatiki ping yekutsvaga injini zvakare. Zvakanaka chaizvo.
Kana iwe ukaisa mune iyo mepu uye iri mune wpblog dhairekitori zvakare, iwe unogona zvakare kuisa redirect kwazviri futi:
Dzorerazve sitemap.xml http://hamelife.com/wpblog/sitemap.xml
Chenjerera uye chengetedza htaccess yako faira (inogona kunge yakavanzwa saka ive shuwa kuona yakavanzwa mafaera neako FTP software) kana iwe ukaizoisa iyo kumusoro!
Wobva waita chokwadi chekuwedzera iyo sitemap mutsara kune yako robots.txt faira. Kana iwe uine iyo inonongedzera mutsara mukati mako htaccess faira, unogona kushandisa chero URI… ini ndingangodaro ndotadza kune iyo chaiyo, asi:
Jul 8, 2007 na4: 19 PM
Ini ndichangobva kuisa yako 404.php, Doug.
Edza IZVI: hamelife.com/child
zvino, ndizvozvo peji riri nani makumi mana nemakumi mana!
Zvakare - Mazhinji Kutenda.